Buckwheat အစားအစာ | တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် Keto Diet
အစားအစာတစ်ခုသည်လူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံး၏အခြေအနေပေါ်တွင်မူတည်သည့်ကျန်းမာသောအစားအစာဖြစ်သည်။အစားအစာများတွင်အသုံးပြုသောအစားအစာများထဲမှတစ်ခုမှာဂျုံဂျုံဖြစ်သည်။Buckwheat diet သည်မလိုအပ်သောပေါင်များဖယ်ရှားရန်ထိရောက်ပြီးလွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အလှအပကိုဂရုစိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မမေ့သင့်ပါ။ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းနည်းလမ်းကိုမည်သို့ပင်ပြုလုပ်ပါစေ၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုမထိခိုက်စေသင့်ပါ။ထို့ကြောင့်အစားအစာကိုပညာရှိစွာရွေးချယ်ခြင်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေသည့်မည်သည့်အစားအစာကိုမဆိုထိရောက်မှုရှိရုံသာမကအသုံးဝင်သင့်သည်။
buckwheat diet ၏အားသာချက်ကိုကြွယ်ဝသောတွင်းထွက်ပစ္စည်းများနှင့်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များနှင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါးခြင်းတို့ကရှင်းပြသည်။ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများအောက်တွင် fatty သိုက်များကိုခွဲထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာဖြစ်ပေါ်သည်။buckwheat diet ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အနည်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးဖြင့်အားစိုက်ထုတ်စရာမလိုဘဲအကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။
အစားအစာတွင်ဂျုံယာဂုမျှသာမပါ ၀ င်ဘဲထပ်ပေါင်းထည့်စရာမလိုဘဲ၊ အခြားထုတ်ကုန်များ (ကဖေး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးခြောက်များ) နှင့်ပါ ၀ င်သည်။အစားအစာ၏ကြာချိန်မှာ ၇-၁၄ ရက်ဖြစ်ပြီးအလေးချိန် ၇-၁၂ ကီလိုဂရမ်ရှိနိုင်သည်။
Buckwheat diet သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုချခြင်းအတွက်လိုအပ်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုစားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာကိုလိုက်နာခြင်းသည်မီနူးတွင်ထုတ်ကုန်များစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချသည့်အစီအစဉ်များထက်များစွာလွယ်ကူသည်။ထို့အပြင် buckwheat diet တွင်အနိမ့်ဆုံးကယ်လိုရီပါဝင်မှုသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အသုံးဝင်သောအာဟာရများနှင့်ဒြပ်စင်များဖြင့်လည်းကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်။
buckwheat တွင်အုပ်စု၊ ခအုပ်စုမှသံ၊ မဂ္ဂနီစီယမ်၊ အိုင်အိုဒင်း၊ ကယ်လစီယမ်၊ ဗီတာမင်များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတွင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပရိုတိန်းများစွာပါ ၀ င်သည်။ဖွဲ့စည်းမှု၏ချိန်ခွင်လျှာသည်ကျန်းမာရေးကိုများစွာထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ (၁၄ ရက်ကျော်အစာမစားလျှင်) ဂျုံဖြင့်သာစားနိုင်သည်။၎င်း၏ရိုးရှင်းသော်လည်းလူတိုင်းသည် buckwheat diet ကိုမကြိုက်ကြပါ။အသားကိုမှန်မှန်စားလေ့ရှိသူများအတွက်ဤသည်မှာကြီးလေးသောစမ်းသပ်မှုဖြစ်သည်။
သင်ဟာ contraindications နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးမှသာ buckwheat diet အခြေခံမူကိုစတင်လိုက်လျှောက်နိုင်သည်။ဤကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်အစားအစာကိုသင်မသုံးနိုင်ပါ။
Buckwheat Diet Basics
buckwheat diet တွင်အများဆုံးရလဒ်များရရှိရန်အရေးကြီးသောအချက်များစွာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
ဂျုံချက်ပြုတ်ခြင်းသည်အမျိုးမျိုးမဝါကြွားနိုင်ပါ။ထို့ကြောင့်, mono အစားအစာများပင်အချို့သောအခြားအစားအစာများကိုခွင့်ပြု။buckwheat ဂျုံယာဂုနှင့်သင်ပေါင်းနိုင်သည်။
အစားအစာအားလုံးသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သောအရာဝတ္ထုများ၏ပမာဏကိုသိသိသာသာလျှော့ချပေးကြောင်းသတိရပါ။ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဗီတာမင်များမရှိခြင်းကိုသင် multivitamin ရှုပ်ထွေးသောဆေးများကိုစတင်ယူနိုင်သည်။ဤအရာသည်အစာအာဟာရပါ ၀ င်နိုင်သည့်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ကိုများစွာလျှော့ချပေးသည်။ပြီးနောက်၊ ဂျုံစေ့တစ်မျိုးတည်းစားသုံးခြင်းသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
Buckwheat diet: ခွင့်ပြုထားသောအချိုရည်များ
ဒီကိုယ်အလေးချိန်ကျတဲ့အစားအစာကိုမင်းဘာသောက်မလဲ။ဂျုံဂျုံအစာကိုစားချင်သူတိုင်းအတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောမေးခွန်းတစ်ခု။နူးညံ့သောအာဟာရအကြောင်းပြောနေတာဆိုရင်သင်ကဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့်လက်ဖက်စိမ်းနှင့်သဘာဝကော်ဖီနှစ်မျိုးလုံးကိုစိတ်ချစွာသောက်နိုင်သည်။ကော်ဖီနှင့်လက်ဖက်အကြားရွေးချယ်မှုပြုလျှင်သင်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာပျော်နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရန်မမြန်ပါနှင့်။ထိုအဟုတ်, သကြားသို့မဟုတ်ပျားရည်ကိုမ။ထို့အပြင်သင်သောက်သည့်အရည်၏ diuretic ဂုဏ်သတ္တိများကိုမမေ့သင့်ပါ။
နှင့်ချ - ၃၊ ၇၊ ၁၄ ရက်။
အဘိတ် - ဆား၊ ဆီ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များမထည့်ဘဲရေပွက်ပွက်ဆူနေသောပေါင် ၁. ၅ ကိုပွက်ပွက်ဆူနေသောရေ ၁ လီတာကိုသွန်းလောင်းပါ။တစ်ညလုံးထားခဲ့ပါ
တစ်နေ့လျှင် ၄-၆ ကြိမ်စားသောအစာများဖြင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (မုန်လာဥ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သခွားသီး) နှင့်အဆီနည်းသောကရင် (၁%) နှင့်ပေါင်းစပ်ပါ။အိပ်ရာမဝင်ခင် ၄ နာရီအစာမစားပါနှင့်။ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်အတွက် Buckwheat diet တွင်တတ်နိုင်သမျှရေများများတစ်နေ့ (၁. ၅ မှ ၂ လီတာလီတာ) သောက်သုံးခြင်းပါဝင်သည်။
buckwheat တွင်အမျှင်များနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပရိုတိန်းများပါ ၀ င်သောကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုသည်ပိုမိုမြန်ဆန်လာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအစာအိမ်သည်ယခုအချိန်တွင်လိုအပ်သလောက်လိုအပ်သည်။အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဤအမျိုးအစားသည်သင့်အတွက်မသင့်တော်ပါကအခြားသောသူများကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ၊ အနိမ့်ကာဗိုဓာတ်ပါဝင်မှုကိုစဉ်းစားပါ၊ ၎င်းသည်ဂျုံဂျုံ၏အားနည်းချက်များကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
မျှမျှတတစိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သောဂျုံဂျုံကိုစားသုံးခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နေ့လုံးဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုကိုခံစားစေနိုင်သော်လည်းအမြဲတမ်းတော့ထိုသို့မဟုတ်ချေ။ မည်သည့်အစားအစာအတွက်မဆိုပုံမှန်အစားအစာကိုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူလူတစ် ဦး သည်အစာငတ်ခံတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုစတင်ခံစားရသည်။ဂျုံဟန့်တားခြင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုမချိုးဖောက်ရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုမညှဉ်းဆဲရန်ခွင့်ပြုထားသောမည်သည့်အစားအစာကိုမဆိုသောက်သုံးပါ။
အဓိကအစားအစာများအကြားတွင် ၁% ကီရာဖါသောက်နိုင်သည်။သငျသညျတင်းကျပ်စွာအစားအစာမူကွဲအပေါ်လျှင်မူကားပါပဲ။ပို၍ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေဖြင့်သင်သည်ဒိန်ခဲအချပ်တစ်ခု၊ သစ်သီးခြောက်အချို့၊ ပန်းသီးအချို့ကိုစားရန်ခွင့်ပြုသည်။အဓိကအရာသည်ချိုသောအပင်နှင့် ပို၍ ပင်မစားရန်ဖြစ်သည်။
Buckwheat diet: အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
cellulite လျှော့ချနိုင်မှု၊ အရေပြားနှင့်လက်သည်းအခြေအနေတိုးတက်လာခြင်း။
မည်သည့်အစားအစာကိုမဆိုကိုယ်ခန္ဓာအတွက်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ခန်ဓာကိုယ်အပိုပစ္စည်းများမပါ ၀ င်သောကွောင့် ၁၂ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိမခံနိုင်ပါ။
အနာဂတ်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကြာရှည်စွာပေါင်းစပ်နိုင်ရန်အတွက်သင်သည်ကယ်လိုရီမြင့်မားသောအစားအစာများကိုသတိပြုရန်နှင့်ကာယပညာကိုတက်ကြွစွာပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည်။ Buckwheat diet သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ ပေါ့ပါးခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောခံစားချက်ရရှိခြင်းတို့အတွက်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
သင်ဟာဂလွမ်ဂျုံအစာမှတဖြည်းဖြည်းပုံမှန်စားသောအစားအစာသို့ပြောင်း၊ ကြက်၊ ကြက်ဆင်၊ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲကဲ့သို့သောအလွယ်တကူစားနိုင်သောအစားအစာများကိုသင့်အစားအစာထဲသို့တဖြည်းဖြည်းထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။မည်သည့်အစားအစာမဆို၎င်း၏အခြေခံမူများတင်းကြပ်စွာလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၏အနှစ်သာရမှာ၊ ဂျုံဟင်းတစ်ခွက်၏အကူအညီဖြင့်အဆီပိုလျှံများကိုလောင်ကျွမ်းရန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းတွင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအစာအိမ်မတင်ဘဲပြည့်နှက်နေသည်။